Dare Rinoti VaMujuru Vakakachidzwa neHutsi Vakafira Mumoto
Dare rakaongorora mafiro akaita vaimbova mukuru wemauto, Va Solomon Mujuru, rinoti chakakonzera kuti mushakabvu afe kufema hutsi hunokachidza zvichitevera kutsva kwaakaita. Asi mhuri yemushakabvu inoti haisi kufara nemutongo wapihwa nedare uyu.
Mutongi wedare ramejasitiriti akanzwa ongororo yekufa kwaVa Mujuru, Va Walter Chikwanha, vanoti mushakabvu akafa achiita zvekukachidzwa uye hapana humbowo hunoratidza kuti VaMujuru vangave vakapondwa.
Kunyange hazvo gweta guru renyika, Va Johannes Tomana, vasati vaburitsa zvakawanikwa naVa Chikwanha pachena mushure mekuzvitambidzwa gwaro iri naVa Chikwanha neChina, gweta riri kumirira mhuri yaVa Mujuru, Va Thakor Kewada, vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika, uye vari mudzimai wemushakabvu, Amai Joice Mujuru, vakatambidzwa gwaro iri naVa Tomana neChina.
Va Kewada vanoti muongororo iyi, VaChikwanha vakaona kuti Va Mujuru vakamedza hutsi zvakazokonzera kuti vafe.
Va Kewada vanoti havana kufara kuti havana kukwanisa kupihwa mukana wekuti mazvikokota wemutumbi yevanhu vakafa anobva ku South Africa, Va Reggie Perumel, havana kupihwa mukana wekuongorora mutumbi wemushakabvu patsva.
Va Kewada vanoti vari kuda kuti mutumbi wemushakabvu ufukunurwe pawakavigwa pamarinda anovigwa magamba enyika pa Heroes Acre, kuitira kuti uongororwe patsva.
Va Kewada vanoti zvakawanikwa naVa Chikwanha hazvigutse ruzhinji rwe Zimbabwe pamwe nemhuri yemushakabvu.
Pari zvino, Va Kewada vati vachatevedzera mutemo we Inquest Act uyo unosungira mhuri yemushakabvu kuti isvitse chikumbiro kugukota rinowona nezvinoitika mukati menyika kuti mutumbi uyu ufukunurwe kuitira kuti uongororwe patsva.
Hatina kukwanisa kutaura naVa Tomana kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Va Mujuru vakafa musi 16 Nyamavhuvhu gore rakapera vachiita zvekutsvira mumba yavo iri papurazi ravo riri ku Beatrice.
Kunyange hazvo Va Chikwanha vaburitsa zvavakawana muongororo yemafiro akaita mushakabvu, hapana chati chave pachena kuti chii chakakonzera moto wakazouraya VaMujuru.
Mubvunzo une veruzhinji ndewekuti moto uyu wakakonzerwa nei, uyo unonzi wakakonzera hutsi hwakakachidza VaMujuru kusvika vafa mumoto uyu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezve matongerwo enyika inoshanda yakazvimirira inoti haisi kushamiswa nezvaburitswa neongorori iyi.
VaRejoice Ngwenya vanoti pane nyaya dzakawandisa dzine chekuita nezvematongerwo enyika, kana pachitariswa hupenyu hwaVaMujuru nemafiro avakaita.
Hurukuro naRejoice Ngwenya